Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / Cube Matte Black Basin igwekota Kpatụ
Matte Black Basin faucet nwere nhicha ọcha na anya ohuru ma dikwa nma maka ime ulo mposi nke monochrome. Nke a matte ojii na-acha ọcha na-enweghị isi faịlị na-agbakwunye echiche nke okomoko n'ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ gị. Ejiri ụkpụrụ kachasị mma, jiri seramiiki seramiiki na ndị na-eme Switzerland na ngwa ndị ọzọ dị elu iji nye gị mmezi mmiri na-aga n'ihu ma kwụsie ike.
DABỌCH Limited 30 LimitedBỌCH Limited laghachiri na ego azụ nkwa ：Anyị na-ada n'azụ anyị ngwaahịa, niile kichin fosets na-kwadoo site 3 afọ ole na akwụkwọ ikike, 30 YBỌCH Limited Limited laghachi na ego na-azụ nkwa. ma ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị, anyị nwere obi ụtọ na-enye n'oge ngwọta
Ọgụgụ isi nke mmiri na-azọpụta mmiri: onye na-afụ mmiri na-ewebata ikuku n'ime mmiri na-asọpụta ka ọ bụrụ nnukwu afụ ọcha, ikuku na mmiri jikọtara ọnụ iji mezuo nzube nke ịchekwa mmiri.
Ergonomic ahụ: aka ahụ kwekọrọ na ergonomics, njigide ahụ dị mma, ihe mgba ọkụ ahụ dịkwa mma ma nweere onwe ya
Ejiri ya na ihe mgbawa na-agbawa agbawa: ihe pụrụ iche na-abụghị knotted Ọdịdị nwere ike igbochi entanglement na dripping mere site Anam Udeme, na-eme ka ọ dịkwuo mụ na inogide.
Arọ ahụ buru ibu: nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị, ọdịdị mara mma na nke mara mma, adịghị mfe imebi, na-ebelata ihe ize ndụ njem
ụdị Basin igwekota
ojiji ụlọ ịwụ
ihe onwunwe Brass ahu
Ihe eji eme ihe seramiiki
Ọgwụgwọ ihu Fake Fulati
ọrụ Bathroomlọ ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ma na-ajụ oyi
Dị nwụnye A na-agbanye oche
Agba matte Black
Number nke ejiri Naanị aka
nkwa 3 afọ
Single menjuobi Saa Basin igwekota Kpatụ Chrome
WOW Single Aka Aka Bathroom foset Matte Black
WOWOW Bathroom Vessel na-agbachasị aja aja dị ọcha